Maamulka Gobolka Bari ayaa sheegay inay qaraxii Bosaaos u qabteen Dad loo xaglinayo inay ka danbeeyeen | maakhir.com
Maamulka Gobolka Bari ayaa sheegay inay qaraxii Bosaaos u qabteen Dad loo xaglinayo inay ka danbeeyeen
February 7, 2008 in Somalia
Bosaaso:- Maamulka Puntland ayaa sheeciyay inay gacanta ku soo dhigeen dad lagu xidhiidhiyay inay ka danbeeyeen masiibadii ka dhacaday Magaalada Bosaaso taasi oo ahayd Qaraxii xooga badnaan ee ay ku dhinteen dadka aadka u fara badne, Puntland waxay sheegtay inay qabteen ilaa 5-Ruux kuwaasi oo laga qabtay xaafada ku yaala Magaalada Bosaaso.
Gudoomiyaha Gobolka Bari Muuse Geelle Yuusuf (Faroole) ayaa sheegay inay Booliska Magaalada Bosaaso hawl gal ay xalay qaadeen ay ku soo qabteen ilaa 5-Ruux kuwaasi oo ay sheegeen Maamulka Gobolka Bari inay ka danbeeyeen qaraxii Bosaaso ka dhacay.
Faroole oo saaka Hiirtii waa bari war baahinta la hadlayay ayaa shaaca ka qaaday inay jiraan dad kale oo wali lagu raad joogo, walaw aanu Faroole sheegin dadkaasi inay dibada Magaalada Bosaaso ku sugan yihiin iyo in kale.
Gudoomiyaha Gobolka Bari Muuse Galle ayaa ku nuux-nuuxsaday inay Ciidamada Amaanka ee Maamulka Puntland ay qaadayaan talaabo xoogan taasi oo ay wax kaga qabanayaan Amaanka Puntland oo hoos u dhacay, waxa uu xusay in la adkayndoono dhamaan Baraha kaanta rool ee laga soo galo Magaalada Bosaaso.
Hadalka Faroole ayaa waxa uu ku soo beegmay iyada oo ay Booliska Magaalada Bosaso qaadeen Taloobiyin xoogan kuwaasi oo ay sheegeen in looga gol leeyahy sidii is bedel loogu samayn lahaa Amaanka oo hoos u dhacay.
Qaraxii Magaalada Bosaaso ka dhacay ayaa waxa sheegtay inay ka danbeeyeen Koox la baxday Al- Shabaab kuwaasi oo sheegay inay iyagu dusha u ridanayaan, arinkaasi ayay ku sheeciyeen bar Entarnet- oo ay is ticmaalaan.
« Afqudhac ayaa ka jaabay Hadal ka soo yeedhay Kooxda Al-Shabaab
Reer Bosaaso oo dhexda u xidhay inay U gurmadaan dadkii ka bad baaday Qaraxii Bosaaso ka dhacay »